Soshiyaaldemokaratiga oo doonaya yareynta ardeyda ka booda dugsiga sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soshiyaaldemokaratiga oo doonaya yareynta ardeyda ka booda dugsiga sare
Ardeyda dugsiga sare ka booda
La daabacay tisdag 28 januari 2014 kl 15.38
Xisbiga Socialdemokraterna ayaa doonaya in uu yareeyo ardeyda ka booda dugsiga sare. Waxuuna xisbiga doonayaa in ardeyda la siiyo taageero qaas ah. Xisbiga waxa uu horey ugu taliyey in dugsiga sare qasab laga dhigo. Waayo xisbigu waxuu arkaa muhiimada uu sii yeeshey dugsiga sare sida uu yeri xoghayaha arimaha siyaasada Iskuulka Ibrahim Baylan.
– Waxey ka micno tahay in aan diyaar u nahey maalgelin dheeraad ah oo aan ku sameyno iskuulka si tacliin siinta hadda jirta u sii adkaato, sidoo kalena dhabayaal kale oo badan ardeyda ugu furnaadaan, sida tusaale ahaan Folkhögskola, tababro iyo xirfad barida shaqada dhexdeeda. Arimahaas oo ardeyda u sahalaya in dhameystaan dugsiga sare, ayuu yeri Ibrahim Baylan afhayeenka arimaha siyaasada iskuulka ee xisbiga socialdemokratiga.
Maanta ardeyda afartii sadex ayaa dhameysta barashada tacliinta dugsiga sare. Shir saxaafadeed uu qabtey Ibrahim Baylan ayuu ku sheegey in xisbigiisa doonayo in ay kordhiyaan ardeyda dhameysata tacliinta dugsiga sare.
Dhaboyaasha midaas xisbigaan doonayo in uu u maro ayaa waxaa kamid ah sharuudo cadcad oo la saaro iskuulada oo ku sabsan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen sidii ardeyda oo dhan u dhameysan lahaayeen barashada tacliinta dugsiga sare. Sidoo kale iskuulada in ay u kuurgalaan sababta ardeyda dugsiga sare uga boodaan oo aysan tacliinta u dhameysan. Iyo in iskuulada hirgeliyaan qorshayaal lagu kordhinayo xiisaha iyo niyada ardeyda u hayaan dhameysiga tacliinta dugsiga sare.
Xisbigan Socialdemokratiga ayaa ku taliyey in ardeyga ku dhaca koorso in isla markiiba la siiyo caawinaad uu kaga baxi karo koorsada. Taas oo ah wax ku qoran sharciga iskuulka balse aheyn wax iskuulada oo dhan raacaan.
Ibrahim Baylan ayaa sidoo kale doonaya in dadka ay da’dooda ka hooseyso 25 sanno in ay ahaadaan kuwo dhamaantood soo dhameystey oo ka soo baxey dugsiga sare, sidaa daraadeedna laga dhigo dugsiga sare mid waajib ah. Taas oo cadaadis ku saari doonta iskuulada in ay siiyaan caawinaada ardeyda u baahan yahiin.
– Marka koobad waa in laga dhigaa dugsiga sare mid waajib ah.
– muhiimada ma ahan in kalaasyada la joogo ee muhiimada waxa weeye in ay helaan tacliin. Waxaana dooneynaa in aan taas ku gaarno; iyada oo dugsiga sare laga dhigo waajib iyo in ardeyda la siiyo taageero dheeraad ah oo shaqsiyeysan si ay u dhameystaan waxbarashooda dugsig sare. Maanta in uu san dugsiga sare qasab aheyn waa mid loo adeegsado ardeyda oo la yiraahdo "qasab ma, ahan uma baahnid in aad halkan joogtid". Dhibaatada maanta waxa weeye dhallinyarada waxey ku dhageen shaqo la’aan iyo banaan ka ahaanshada bulshada, taasna ma ahan wax sii socon kara, ayuu yeri Ibrahim afhayeenak siyaasada iskuulka ee xisbiga socialdemkratiga.
Ma kula haboon tahay in dugsiga sare waajib laga dhigo?
Fikir kamo qabo